Shina manintona Sola voninkazo am-borona vita amin'ny hazo menaka manitra sy mpamatsy | Hoyer
Mahavariana Sola voninkazo am-borona vita amin'ny voninkazo noho ny menaka manitra
- 100% voajanahary. Ny voninkazo Sola dia vita amin'ny hazo Sesbania sy ny lamba vita amin'ny landihazo.
- endrika voninkazo: raozy, rosaceae, paeonia, voninkazo peach, lotus, chrysanthemum sy ny sisa ...
Size: Diameter: 4cm / 4.5cm / 5cm
Color: fotsy na araka izay takianao
MOQ: 1 000pcs, latsaky ny habeny azo ekena koa raha manana tahiry isika
The voninkazo sola novokarina tany Amerika Atsimo aloha. Amin'ny maha-fitaovana voalohany amin'ny fanamboarana voninkazo maina, dia manome fanantenana ny olona foana izy ireo. Taorian'ny fijinjana dia maina amin'ny masoandro izy io, fa ny fanahiny kosa tavela eto amin'izao tontolo izao ary tapaka amin'ny ampahany. Rehefa avy namolavola ny mpanao asa tanana dia lasa voninkazo tsara tarehy, izay ampiasaina betsaka amin'ny fofona tsy misy afo miaraka amin'ny endrika tsara tarehy sy kanto, dia manazava ihany koa ny toetoetran'ny menaka ilaina amin'ny aromaterapy.
- habe: halavany 4cm / 4.5cm / 5cm na habe natao namboarina
- Ampidiro amin'ny tady tady na mametaka anaty tavoahangy manitra fofona manitra ho enti-manitra ary manaparitaka ny fofona ho toy ny fofom-borona ao anaty trano.
- tonga lafatra ampiasaina ho toy ny haingon-trano spaoro an-trano.
Ny voninkazo tsirairay dia vita amin'ny fitaovana voajanahary amin'ny tanana, sarotra ny dingana. Misy lesoka indraindray indraindray, ambaratonga mainty, vongan-javamaniry maintso mavo ary poti-paty mandritra ny dingana vita amin'ny tanana. Raha hokapohina na tsy miova ny voninkazo mandritra ny fanaterana an-tsoratra, tadidio fa aza mikasika azy ireo amin'ny tanana. Mety ho lasa tsara amin'ny modely tany aorina izy rehefa avy mifoka ny menaka.
Size Diameter: 4cm / 4.5cm / 5cm na habe natao namboarina 1,57 sm / 1,77 santimetatra / 1,97 santimetatra na habe natao namboarina
Color fotsy loko namboarina azo ekena ihany koa
MOQ 1,000pcs Tsy ampy ny habetsahana ekena koa raha manana tahiry isika
Previous: 3mm * 25cm Reed Stick ho an'ny tavoahangy diffuser
Manaraka: Zavamaniry varahina mainty vita amin'ny laoniny ho an'ny setrin'ny menaka diffuser
sola voninkazo diffuser
varotra voninkazo sola